सरकारलाई साढेसाती | चितवन पोष्ट
आज हाम्रो देश मुख चारतिर बङ्ग्याएर बाङ्गिने रोगको बिरामी छ । अलिकति दम्भ र अलिकति स्वार्थको लडाइँमा रणभुल्ल छ । आवेशको निर्णयमा बोक्ने र पछार्ने कुरूप शैलीको परिणाम जनतालाई, कसैलाई काख दिने र कसैलाई बन्दुक तेस्र्याएर नरिसा भन्नु पनि राम्रो नहोला । विरोधी मानसिकता र दम्भी सोचको युद्ध छ । साढेसाती दशा लाग्दा अपशकुन भइरहन्छ भन्थे मुलुकले माओवादी द्वन्द्वयता मात्र लगभग चारवटाभन्दा बढी साढेसाती कटाउने अवस्थामा सम्म ग्रहशान्ति हुन सकेको छैन । देशको समुन्नतिको ढोल पिट्नुपर्ने समयमा सरकारलाई अल्झनका बखेडाले बाटो भुल्याउँदै छ । एकातिर रेशम चौधरीको जन्मकैदको प्रसङ्ग, अर्कोतिर सीके राउतलाई सर्वोच्चको आदेशपछि गरिएका सम्झौता र आजको माहोल अनि, विप्लवको प्रसङ्ग– सरकार सबैतिरबाट चक्रव्यूहमा फसेको छ । विखण्डनकारी को हो र राष्ट्रवादी को हो, अब पासाको खेलजस्तो देश सोचको गुमराहमा अलमल्ल नभएको भन्नै सकिएन ।
आज राजनीतिक समस्याका चाङमा आफ्नै पार्टीभित्रको साङ्गठनिक अन्तर्विरोधको दबाब छ । एकीकरणको ठोस आधार गुमराह लम्बिरहने ढिलासुस्तीमा कामको चुस्ती सुकेको तिरतिरे धारो बन्दै छ । सरकार अनेकौँ विषयभित्र मतभेदको सिकार बनेर आलोचित बनिरहनू बहुमत हुँदाहुँदै पनि अचम्मको विषय बनिरहेको छ । विप्लव प्रतिबन्धको प्रकरणमा हिंसा, आतङ्कको अन्त्य गर्ने भन्ने सुशासन र शान्तिको यात्रा असहज हुने भय पनि छैन भन्नै सकिएन । जनता हैरानी र बेचैनीबाट अभैm कति समयसम्म प्रताडित रहने ? सत्ता साझेदार फोरम पनि सहयोगी बनेको छैन । रापजाले सरकारसँगको समर्थन फिर्ता लियो । यतिखेर बाम सरकार बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै एक्लो बनेको भान हुन थालेको छ । साथमा बलियो प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस सहयोगी बन्न नचाहँदा अनि साढेसातको ग्रहशान्ति कसरी हुन्छ ?
जनताको दोष– सही र गलत छुट्याउन नसक्नु हो । नयाँ परिवर्तनको परिणाम आउन समय लाग्छ । जादुको छडी जस्तो विकास खोजेर पनि हुँदैन । सरकारलाई विरोध गरेर अब कति कचिङ्गल गर्ने, बरु साथ दिउँ न त जनतासँग सरकारले के चाहन्छ– हामी तयार छौँ भन्ने भावना हुनुपथ्र्यो । यसको ठीकविपरीत विरोध गर्ने प्राचीन रोगले छोडेको देखिँदैन । यद्यपि सरकारले जनभावनालाई कदर गर्न विकासका बाटामा ठोस योजना लिएर अघि बढ्न सकेकै देखिँदैन पनि । एकवर्षे उपलब्धिका सबै कुराका बारेमा जनता अज्ञात प्रायः छन् । सत्यतामा अध्येता पनि विश्वस्त नबन्नु नौलो कुरा होइन किनकि जनतालाई मपाईँत्व पोख्ने नेताको शैलीमा भाषण ठूलो गर्ने र काम गर्न हजु¥याईँकै पहुँच चाहिने परम्पराको बारेमा हैरानी घटेकै छैन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका नारामा आर्थिक रूपान्तरणको सवाल जोडिँदा के कसरी भन्ने पूर्वयोजना जनताले बुझ्ने गरी आएको पनि त छैन । द्रुत विकासका लागि उस्तो कामको हतारो पनि नदेखिएका कारणले नै आज जनताको मनभित्र नैराश्यता मडारिरहेको छ, कुण्ठा पोखिइरहेको छ । अर्को पाटोमा जनताको मनमा विकासको अर्थ भौतिक संरचना मात्रै हो भन्ने एक किसिमको छाप भरिँदै गएको छ तर योजनागत, सोच विचारगत प्राज्ञिक क्षेत्रका कुरा छायामा पर्नु जनचेतनागत कमजोरी पनि हो ।
नेपालको अस्थिरताको अन्त्य गर्न अतिवादी, पश्चगामी सोचमा परिवर्तन हुनुपर्छ । जनताको आवाजभित्र देशद्रोह नगासिँदासम्म स्थान पाउनुपर्छ किनकि यो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, आजको भाषामा जनभावना हो । देशको हीतमा छ भने त संविधान पनि ढुङ्गाकै अक्षर होइन बदलिन सक्ला । सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय हीत तथा समुन्नतिमा रूपान्तरित विचार आउँछ या त जनता खुसी हुनेसम्मका विषय सम्बोधनयोग्य पनि त हुनसक्लान् । सरकारका केही नेताले हामीले ल्याएको परिवर्तन उल्ट्याउन खोजिन्छ भने प्रतिकार नै गरौँ भनेर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्न पनि नाजायज हुन्छ । अतः परिवर्तनको विश्लेषणका क्रममा आवश्यक र अनावश्यक पक्षलाई केलाएर राजनीतिक विचारहरू जनप्रेमी बन्न सकून् । रगत बगाउने कुनै पनि असह्य दुराचारी प्रवृत्ति छोडेर शितयुद्धको खाँचोलाई महसुस गरौँ । रगतको खोलो बगाउनेले पनि बोलौँ ताकि जनताको रगत, जनधन, बाँच्न पाउने मानवीय हक अब कुनै पनि तबरले नलुटियोस् । हिजो झण्डै दुई दशक संख्यामा जनताको प्राण आहुतीले काख रित्यायो, सिन्दुर पुछ्यो, टुहुरो बनायो, अत्याचारको वितण्डा मच्चायो । ती दिन सम्झँदा कहाली लाग्दा छन् भने अब यसको ठोस चिन्तनमा विकासको हुङ्कारका साथमा शितयुद्ध, वाक्युद्ध गरौँ ।
नेपाल आमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म छिन् । हिमाल, पहाड र तराईको एकतामा कसिलो छ हाम्रो देश । सबै भौगोलिक संरचनामा सुसज्जित भगवान्ले सोचेर बनाएको कुनै देश छ भने त्यो हो– नेपाल । यो देश सधैँ अखण्ड छ र अखण्डै हुनेछ । तराईका जनताले नेपाली हुनुमा गर्व गरिरहँदा हिमालले शितलता दिइरहन्छ भने यहाँको बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक एकतामा कसिलो नातो गाँसिएको छ । चन्द्र–सूर्य अङ्कित झण्डाले सिङ्गो सौर्य मण्डललाई नेतृत्व गर्छ । चन्द्रमाले सिङ्गो तारागणलाई नेतृत्व गरेको छ ।
सगरमाथाको देश, बुद्धको देश, भृकुटी र सीताको भूमि, जनकको आदर्शताले सुसज्जित मुलुकमा अशान्ति कसरी शोभनीय बन्छ ! चाहे सीके राउतको सोच होस् या अन्य कुनै समुदायको, सत्ताधारी वा प्रतिपक्षी– आखिर सबैको चाहना देशको भाग्य र भविष्य निर्माणको हो भने द्वन्द्व, विद्रोह, बेमेल, स्वार्थ, अत्याचारी विचार कसका लागि ? हुनलाई शत्रुका लागि देशका हीतका लागि लड्ने वीर पुरुषको क्रान्तिभूमि नेपाल हो भने बुद्ध र जनकको शान्तिभूमि पनि त हो । तब फेरि रडाको केका लागि, के पाइन्छ किचलोले र के पाए यस अघि मारिएका र मरेका आत्माहरूले ? सोचौँ, हाम्रा पुर्खाले लडेर एक बनाए । हामी तिनका धरोहरमा जिएका छौँ । भलै देशमा गरिबी छ तर देश गरिब छैन । यहाँ सम्भाव्यता छन्, केलाउँ र बेकारको गफ गर्नुको साटो हामी नवीन विकासका योजना बुन्न जान्दैनौँ त ? बम र बारुद बनाउने योजना, अर्कालाई लडाएर आपूm माथि जाने भन्ने स्वार्थ, चुक्लीको साटो समृद्धिका नवीनता नियाल्न किन सक्दैनौँ जहाँ ४० प्रतिशत युवा जनशक्ति र विकास गर्ने अथाह आधार छन् । तब होला साढेसातीको ग्रहशान्ति ।